maimaim-poana Mampiaraka ny vehivavy tany Etazonia Mampiaraka toerana
Aho mitady ny lojika sy intuitive fomba fijery ny olona iray, dia tokony ho ampiharina raha tsy misy mikasika ny olana ny fahavelomana, ny fitadiavana ny tena. Fantatro ny toetra, ny hery, ary ny tanjona.
Raha ny tsirim sy ny tanjona dia iray ihany, izany dia mahafinaritra akony.
Isika haka an-kolaka avy
Marina, ny olona, ny intuitive-lojika karazana. Te handroso, te bebe kokoa ny fiainana, mino fa ireo fahagagana. Ara-dalàna ny fiainam-pianakaviana tsy mampaninona, tena ny. Aho mitady azo antoka mpiara-miasa, iza no mahalala, marina, tsy manam-petra, inflating an-kolaka vibrations sy ny tsara ny toe-piainana noho ny fakàna an-kolaka avy. Mandrakizay ny mpianatra sy ny enim-polo taona, a sy b. Mandihy, lamaody, mendrika, rindran-kira, mpanao zava-nitranga, flash andian’olona ny zava-drehetra mahaliana, mazoto, fifaliana. Tiako mba hankafy fiainana, dihy, hanao ny tsara, manampy sy mahita tsiky eo amin’ny olona hafa ny endrika, tiako niainany sy ny travel, cruises sy ny resaka, aho Tiako ny namana, tiako ny ankizy kely sy ny biby. Fitiavana, firehetam-po, ny hatsaran-tarehy-izay ny fararano.
I live in North Carolina tao an-tranony
Ny fiainako rehetra efa niaina, nianatra sy niasa tao Saint-Petersburg. Ny antsasaky ny rà zom-pirenena: reniny Jiosy, ny rainy dia Breziliana. Olon-dehibe iray zanaka, ny fiainantsika manokana. Dia hitarika fomba fiaina ara-pahasalamana: izaho mahandro ny marina lovia, ny fanatanjahan-tena. Ny mahatsara: voalanjalanja, miantsena kitapo, tsara ny olona, mahalala fomba. Mpanohitra ihany koa ny hoe: ratsy nify, ny olana amin’ny teny anglisy, fahitan-tory. Te-hatory ao miavaka fandriana raha te-handray hiara-mamindra. Aho mitady ny olona ho lehibe fifandraisana maharitra. Ny olona iray izay mahafantatra ny zavatra tiany avy eo amin’ny fiainana.
Tsara, tsara, manan-tsaina
Tiako ny hahita ny lehibe olona amin’ny toetra amam-panahy mafy, matoky tena, afaka mankasitraka, fanajana sy fitiavana ny vehivavy. Inona no afaka miala tsotra andro ho andro tsy fiasana? Mba hahafahana manao ny rariny ny zavatra manokana momba ny olona iray, te hamorona fifandraisana izay isika isika hahatakatra ny tsirairay mandrakizay tsy teny. Tonga soa eto amin’ny ny Mampiaraka toerana ho an’ny vehivavy ao amin’ny USA. Eto ianareo afaka mijery ny mombamomba ny vehivavy rehetra manerana ny firenena ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana. Fa aorian’ny fisoratana anarana, ianao dia afaka mampiasa ny fifandraisana amin’ny vehivavy sy ny ankizivavy tsy afa-tsy ny ETAZONIA, fa koa any amin’ny firenena hafa izao tontolo izao. Raha te-hihaona, hahita ny fitiavana, ho vaovao ny olom-pantatra, mitady ireo namana, dia ny tapany faharoa, ny Mampiaraka toerana no miandry anao
← Ny Fivorian'ny Brezila
Karama Mampiaraka toerana ho an'ny olona →